OLED o QLED: ¿cuál es la mejor tecnología အတွက် televisores nuevos?
Cuando entramos en စတိုးဆိုင် de electrónica para comprar un Smart TV nuevo en la mayoría de los casos encontraremos dos siglas en Las fichas técnicas: သင်ပါ mi QLED. Aunque en el papel parezcan tecnologías similares, en realidad estos dos acrónimos identifican dos tecnologías distintas y separadas para los paneles Que componen la parte visual de la televisión (es decir, la que reproduce las imágenes transmitidas).
Si nosotros también nos quedamos နှင့် algunas dudas sobre estas siglas, nos encontramos con la guía adecuada:acontinuación ilustraremos, en palabras sencillas, OLED နှင့် QLED ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ လက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးနည်းပညာကဘာလဲ။ cuando hablamos de televisores de gama alta o premium (con costes casi siempre superioresalos 1000 €). Obviamente para cada tecnología cubierta también le mostraremos ကျနော်တို့စဉ်းစားနိုင်အချို့စမတ်တီဗီမော်ဒယ်များထို့ကြောင့် Amazon (အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်သိုမဟုတ်စျေးဝယ်စင်တာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငွေစုသည်အမြဲတမ်းရှိသည့်) Amazon တွင်အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုသို့ချက်ချင်းသွားနိုင်သည်။
အဖတ်ကိုလည်း: အကောင်းဆုံး Smart TV ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ
ဘယ် TV panel ကိုရွေးမလဲ
နောက်အခန်းများတွင်သင်ဘာအကြောင်းပြောမည်ကိုပထမ ဦး ဆုံးသင်ပြပါလိမ့်မည် ဖော်ပြခဲ့တဲ့နှစ်ခုနည်းပညာများအကြားခြားနားချက်များ en la introducción del artículo y, como toda buena guía que se precie, encontraremos nuestra guía de compra donde será posible visualizar televisores para cada tecnología mencionada, para que siempre podamos elegir el modelo que mejor se adapteanuestras necesidades.
OLED နှင့် QLED အကြားခြားနားချက်များ
Las diferencias entre los dos tipos de paneles son estructurales y difíciles de superponer, incluso siaprimera vista parecen ရှိ un nombre similar.
Los paneles OLED están compuestos အားဖြင့် diodos LED de tipo orgánico capaz de emitir luz propia, sin necesidad de panel retroiluminado: de hecho, todos los colores de la imagen (RGB) y los puntos blancos son gestionados por LEDs orgánicos píxelapíxel. La primera ventaja está ahí para que todos la vean: cuando un píxel OLED está apagado, el negro es realmente "negro", ya que no hay un panel de luz detrás para filtrar. No es una coincidencia que los OLED le permitan ရယူ negros y contrastes realmente profundos sin usar software de contraste dinámico. Por otro lado, sin embargo, el brillo de los OLED no es alto y, en escenas muy animadas, နိုင် sufrir un efecto de despertar desagradable (compensable mediante software).
QLED panel များသည် LCD panel များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် vendido hasta ahora, pero con una diferencia sustancial: backlight panel ကိုကွမ်တမ်အစက်များစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ် (ကွမ်တမ်အစက်) ။ ဤနည်းပညာသည် OLEDs များနှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်မှုကို (OLEDs ၏နှစ်ဆထက်) ကျယ်ပြန့်သောအရောင်အဆင်းကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ (အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်များတွင် OLED အဆင့်နီးပါး) ။ ချို့ယွင်းချက်များအရကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိသုံးစွဲမှုအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်၊ မြင့်မားသောတောက်ပမှုကိုနှောင့်ယှက်နိုင်သည် (သို့သော်အမြဲပြုပြင်နိုင်သည်) နှင့်အမြဲတမ်းမပြည့်စုံသောအနက်ရောင်၊ အထူးသဖြင့်မည်သည့်စနစ်အသုံးမပြုပါကတွေ့ရသည်။ ပြည်တွင်းမှိုင်း O Micro Dimming ထုတ်လုပ်သူက (ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အနက်ရောင်reproduရိယာများကိုပြန်လည်ထုတ်ယူသောအခါအသုံးမပြုသော LEDs များကိုပိတ်ထားသည့်နည်းပညာများ) ဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်စစ်မှန်သောအောင်မြင်သူမရှိတော့ပါ။ နည်းပညာတစ်ခုစီတွင်၎င်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဆောင်းပါးတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ living ည့်ခန်းနှင့်အလင်းရောင်အခြေအနေများနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ရမည့်အရာဖြစ်သင့်သည်။ Qué tan lejos se puede ver un televisor o monitor según el tamaño de la pantalla.
ဤအခန်းတွင်နည်းပညာနှစ်မျိုးလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးတီဗီမော်ဒယ်များကိုသင်ပြရန်ကြိုးစားပါမည်။ သို့မှသာသင်အကြံပြုထားသောမော်ဒယ်များကိုစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်စျေးဝယ်စင်တာတွင်မြင်နိုင်သောသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည် (၀ ယ်ယူမှုအတွက်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုသည်အရေးကြီးသည်) ။
ကျွန်တော် OLED တီဗီကိုအာရုံစိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့အကြံပေးတာကLG OLED တီဗီ AI ThinQ OLED55BX6LB, အမေဇုံတွင်ယူရို ၁၁၀ ဖြင့်ရနိုင်သည်။
En este Smart TV encontramos un panel OLED de 65 pulgadas, resolución 4K UHD, soporte HDR, procesador α7 Gen3 con Dolby Vision, အသံ con soporte IQ / Dolby Atmos, compatibilidad con el sistema de sincronización de video NVIDIA G-Sync, sistema operativo dedicado WebOS ThingQ, conexión Wi-Fi, Bluetooth y soporte para asistentes de voz de Google Assistant y Alexa.
မျက်လုံးပိတ်ပြီးအာရုံစူးစိုက်နိုင်သည့်နောက်ထပ်ကောင်းမွန်သော OLED တီဗီဖြစ်သည် Sony KD75XH8096PBAEP, အမေဇုံတွင်ယူရို ၆၀ အောက်သာရနိုင်သည်။
En este Smart TV encontramos un panel OLED de 75 pulgadas, resolución 4K UHD, soporte HDR, procesador 4K X-Reality Pro, sistema operativo အန်းဒရွိုက် TV, conexión Wi-Fi, Bluetooth y soporte para los asistentes de voz más famosos.
အကယ်၍ အစားထိုးမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ QLED နည်းပညာကိုအာရုံစိုက်ချင်တယ် စဉ်းစားရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည် Samsung Q70T စီးရီး, အမေဇုံတွင်ယူရို ၆၀ အောက်သာရနိုင်သည်။
En este televisor encontramos un panel QLED de 75 pulgadas, resolución 4K UHD, soporte Quantum HDR, procesador Quantum Dot, sistema de atenuación local, conexión Wi-Fi, Bluetooth y sistema operativo dedicado (compatible con todas las applications များ más famosas).
အစားကျနော်တို့ကနိမ့်ဆုံး QLED တီဗီချင်တယ်ဆိုရင်, ငါတို့အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ် တီဗီ TCL 50C711, အမေဇုံတွင်ယူရို ၆၀ အောက်သာရနိုင်သည်။
Este impresionante televisor အကောင့် con un panel QLED de 50 pulgadas, resolución 4K, sistema HDR 10+, iluminación con atenuación micro, sistema de အသံက Dolby Vision, compatibilidad con Dolby Atmos, control de voz manos libres y sistema operativo Android.
Obviamente, como todas las grandes comparaciones tecnológicas, no hay un ganador absoluto: si nos encanta ver muchas películas y စီးရီး de televisión por la noche o en la oscuridad es preferible centrarnos en los OLED (con negros realmente bonitos y profundos), mientras que si miramos la televisión en un ambiente brillante, es recomendable centrarse en los QLED de gama alta, para poder capturar cada color y cada detalle con la máxima calidad.
Para asegurarnos de comprar siempre el mejor Smart TV para nuestras necesidades y de comprar en el နေရာ indicado y si es အွန်လိုင်းတီဗီသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်တီဗီဝယ်ရန်ပိုကောင်း.
Si por el contrario queremos profundizar la discusión sobre los sistemas operativos para Smart TV y elegir el mejor sistema, te sugerimos leer los artículos Smart TV ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ mi Samsung, Sony နှင့် LG App System အတွက်အကောင်းဆုံးတီဗီ.